kubudikidza Liam Mallari 21/02/2019
chitima kufamba, Chitima kufamba Britain, Chitima kufamba UK 0
Ehe saizvozvo, kunze achiziva zvinhu zvokuita muLondon, zviri zvinokoshawo kufunga kunze logistics okufamba yako. Kudzokera ikoko nechitima chimwe chezvinhu zvakasikwa mikana, kunyanya kana uri kufamba kubva mumaguta makuru European kufanana Paris, Amsterdam, kana Berlin. Heuno muchidimbu London mabasa uye zvitima kuti achakubatsira kuronga zororo renyu:
Nokuti vaya vanotarisira Zvinhu Kuitira muLondon kuti vane ukama kunotenga, Misika siyana chichava womumhuri yenyu kushanya. Uri kutsvaka zvechokwadi, zvokudya zveko? Ongorora Borough Market uye Mharidzo ayo gastronomic zvinofadza, kana kudya mumwe mumaresitorendi pedyo. Kana uri zvakawanda zviri kumunetsawo vamwe dhipatimendi chitoro kunotenga, Liberty inzvimbo huru. Nerumwe, enda vachivhima vamwe Antiques tonhorera pa Portobello Road Market.
Kusvika UK guta kubva Berlin nechitima hungada mbiri dzokuchinja. Chokupedzisira cherwendo rwendo zvakafanana kubva Amsterdam, uye ipapo achikwira Eurostar. zvisinei, Munogonawo kudzidzisa kufamba kubva kubva Berlin kusvikira Cologne, apo iwe aizokwira chitima kuna kweBrussels. Ndiyo uchitsanya chitima rwendo kubva Berlin kuLondon uye anotora zvishoma ipapo 10 maawa uye unogona kuita zvose zvinhu zvawakadzidza pamusoro pezvinhu kuita muLondon.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei kadhi rine Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-things-to-do-london/ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
chitima kufamba, Chitima kufamba Austria, Chitima pakufamba Belgium, Chitima kufamba Denmark, Chitima kufamba France, Chitima kufamba Germany, Chitima kufamba Hungary, Chitima kufamba Italy, Luxembourg Train pakufamba, Chitima kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Travel Europe 0
chitima mari, chitima kufamba, Chitima kufamba Italy, chitima kufamba Mazano 0
Chitima kufamba France, Chitima kufamba Italy, Chitima kufamba UK, Travel Europe 0